जताततै कोरोना कै चर्चापछि हरेकको मनमा ड’र, अस्पतालमा लाग्यो यस्तो भी’ड ! – Butwal Sandesh
जताततै कोरोना कै चर्चापछि हरेकको मनमा ड’र, अस्पतालमा लाग्यो यस्तो भी’ड !
विश्वभर म हामारिको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइ’रसको चौतर्फी जो’खिम बढेसँगै धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा कोरोनाको भ’य लिएर आउनेको सङ्ख्या बढ्दो छ । सामान्य रुघाखोकी र ज्वरो आएका बि’रामीहरु कोरोनाको आश’ङ्कामा हता’स बनेर आउने क्रम बढेको अस्पतालले जनाएको छ ।
देश विदेशमा कोरोनाको चर्चा सुनेको र यही बेलामा रुघाखोकी लागेकाले कोरोना आश’ङ्कामा परीक्षणका लागि अस्पताल आएको जैमिनी नगरपालिकाका विष्णु थापाले बताउनुभयो । “जताततै कोरोनाकै चर्चा सुनेर मनमा एक किसिमको डर हुन्छ,” थापाले भन्नुभयो, “यस बेलामै रुघा लाग्ने, घाँटी दुख्ने गरेकाले अस्पतालमा परीक्षण गर्न आएको हूँ ।”
दी’र्घरोगीलाई छिटो स ङ्क्रमण हुने भन्दै अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आएको लामो समयदेखि मु’टु रो’गबाट पी’डित भइरहनुभएकी एैसरा रानाले जानकारी दिनुभयो । धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा व्यावहारिक अभ्यासका लागि प्राविधिक विद्यालयबाट आउनुभएका श्रृष्टि बराइलीले बच्चाहरुलाई सामान्य रुघखोकी लाग्दा पनि कोरोना लाग्यो भन्दै आत्तिँदै आउने गरेको बताउनुभयो । “यो मौसम परिवर्तनको समय भएकाले रुघाखोकी र भाइरल ज्वरो धेरैलाई लाग्न सक्छ,” धौलागिरी शिक्षा प्रतिष्ठान एचए तेस्रो वर्षमा अध्ययरनत बराइलीले भन्नुभयो, “कोरोना भाइरसको ड’रले बच्चादेखि पाका मानिसहरु पनि मलाई कोरोना त लागेको छैन भनेर आफैँ सोध्नुहुन्छ । यस्तो सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ ।”
बच्चाहरुलाई अहिले धुलो, धुवाँ र मौसम परिवर्तनका कारण रुघाखोकी, भाइरल ज्वरो आउने भएकाले नआत्तिन स्वास्थ्यकर्मी सुझाउँछन् । यस्ता बि’रामीलाई सम्झाइबुझाइ गर्ने र रगत जाँचसहित परामर्श गरेर पठाउने गरेको बराइली बताउनुहुन्छ । कोरोना स’न्त्रासका कारण अहिले अस्पतालमा मास्क किन्न आउने मानिसको सङ्ख्यासमेत बढेको छ ।
पोखरेलका अनुसार सामान्य रुघाखोकी लाग्नासाथ कोरोना आश’ङ्काले अस्पताल आउन थालेको भन्दै अहिले दैनिक ४०० को हाराहारीमा बि’रामी अस्पताल आउन थालेका छन् । अहिलेसम्म धौलागिरी अस्पतालमा त्यस्तो उच्च जो’खिमका बिरामी फेला नपरेको उहाँको भनाइ छ । कोरोनाको सम्भावित बि’रामी स ङ्क्रमण भएको अवस्थामा पनि छुट्टै कक्षमा राखेर उपचार गर्ने गरी अस्पतालमा दुई शय्यासहितको आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गरिएको डा पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । कोरोना फैलिएको देशबाट आएका, सामान्य रुघाखोकी, ज्वरोभन्दा उच्च जो’खिम भएका, श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएका मानिसहरु भेटिएमा उहाँहरुलाई छुट्टै राखेर जाँच गर्ने, परामर्श, उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पोखरेल बताउनुहुन्छ ।